AASraw Nootropics ntụ ntụ usoro suppliers - AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ
Anyị bụ Nootropics powders powder suppliers, Nootropics powders ntụ ntụ maka ire ere, Dịka anyị kwere nkwa, niile anyị Nootropics powders ntụ ntụ na-adị ọcha bụghị ihe na-erughị 98%.
Nootropics ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka ọgwụ ọjọọ na mmụba nke akpụrụ akpụ, bụ ọgwụ ọjọọ, mgbakwunye, na ihe ndị ọzọ na-eme ka ọrụ nlekọta, ọrụ nlekọta, ncheta, ihe okike, ma ọ bụ mkpali, na ndị dị mma.
Iji ọgwụ ike eme ihe na-eme ka cognition na-eme ka ndị ahụike dị na ya n'enweghị ihe ọmụma ahụike bụ otu n'ime isiokwu kachasị arụmụka n'etiti ndị na-agwọ ọrịa, ndị ọkachamara, na ndị dọkịta nke gbasara ọtụtụ nsogbu, gụnyere ụkpụrụ omume na ịdị mma nke iji ha eme ihe, na-eche banyere nsogbu mmetụta, na ntụgharị nke ọgwụ ọgwụ eji ede ọgwụ maka iji eme ihe n'emeghị ya, n'etiti ndị ọzọ. Ka o sina dị, ahịa mba nile nke ihe mgbakwunye nkwado nke cognition na-agafe ihe karịrị US 1 ijeri na 2015 na ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka ogige ndị a ka na-eto n'ike n'ike.
Nootropics powders ntụ ntụ - mgbe ụfọdụ a na - akpọ ọgwụ ọjọọ - bụ ogige ndị na - eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ. Ha na-aghọwanye ụzọ a na-ewu ewu iji mee ka uche gị nwee ume. Dị ka otu akụkọ Telegraph si kwuo, ruo na 25% nke ụmụ akwụkwọ na-eduga na mahadum UK ejiriwo ọgwụ ọgwụ ọjọọ eji eme ihe, ndị ọrụ ntanetị na California na-anwa ihe niile site na Adderall ka LSD iji mee ka obi ha dị elu.
Anọ m na-erite uru site na Nootropics powders powder since 1997, mgbe m na mgba na arụmọrụ na nyere iwu ihe fọrọ nke nta $ 1000 uru ọgwụ ọjọọ si Europe (naanị ebe ị nwere ike nweta ha n'oge). Echetara m na m mepee ihe ngwugwu aja aja a na-enweghị atụ ma na-eche ma ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ na ihe ndị dị ndụ ga-eme ka ụbụrụ m dịkwuo mma.
Ha mere, na m na-abụ nnukwu akwado nke ụfọdụ cognitive enhancers kemgbe.
Otú ọ dị, ana m atụ egwu ndị ọzọ. Nsogbu na iji okwu blanket dị ka "Nootropics powders powder" bụ na ị na-ekpochapụ ụdị ihe dị iche iche ọnụ. Na nyocha, ị nwere ike ịrụ ụka na caffeine na cocaine bụ ntụpọ Nootropics powders, ma ha adịghị nhata. Na ọtụtụ ụzọ iji mee ka ụbụrụ gị rụọ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ize ndụ ndị dị mkpa, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji lee ntụpọ Nootropics powders ntụpụ na usoro ikpe-azụ.
1) Modafinil bụ ihe kachasị ewu ewu na ebe a mara Nootropics ntụ ntụ gburugburu. Ma n'ihi ezi ihe kpatara ya: ọ na-eme ka ọnọdụ nke inwe ike ịmalite inwe uche, nke a na-ejikọta uche, na-ele anya, ma na-elekwasị anya. N'ihi nke a, ndị astronauts na-eji ụgbọelu International Space Station, ndị na-eme egwuregwu ụwa na ndị na-anya ụgbọelu nke United States.
2) Phenylpiracetam bụ mbipute gbanwere nke Piracetam, ihe mbụ Nootropics ntụ ntụ. Na mgbakwunye nke òtù Phenyl, Phenylpiracetam bụ 10 ugboro dị ike, na kicks na ngwa ngwa. Nke a na-enye ohere ọbụna ntakịrị iji nye ume dị egwu, nke na-ewe ogologo oge iji cognition na arụpụta ihe.
3) Armodafinil meziwanye Nchekwa. Armodafinil bụ analog na Modafinil. Ọ na - eme ka oge nchekwa episodic dị ogologo ma na - akwalite ịdị na - ehi ụra na ndị ọrịa na - ehi ụra nke ukwuu site na mkparụ ụra na - egbochi imechi ma na - agbanwe nsogbu ọrụ.
4) Piracetam meziwanye Nchekwa. Piracetam gbalitere mgbapụta oge nchịkwa / oge dị mkpirikpi na ụmụaka ụmụ nwoke na-enwe nsogbu na 60.
Piracetam gosipụtara ọganihu dị ịrịba ama na ncheta okwu na mkpirisi oge na-adịghị anya na nlebara anya na ndị ọrịa na-aga ịwa ahụ.
Ngwọta oge na-adịghị (250 mg / kg) kwalitere na-arụ ọrụ ebe nchekwa ma mụbaa njide ebe nchekwa (+ citicoline) n'ime ụmụ oke na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
5) Oxiracetam meziwanye Nchekwa. Na ndị ọrịa Alzheimer ma ọ bụ ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa nkwụnye ụkwụ, 800 mg oxiracetam ugboro abụọ ka mma nchekwa, na-enweghị ihe ịrịba ama nke ndidi. Otú ọ dị, ụfọdụ ule na-eme ka a na-eche echiche na-aka njọ karịa nchịkọta usoro mgbe nkedo oge.
N'ime ụmụ mmadụ, oxiracetam na-egosi mmụba ka ukwuu na ihe nchekwa na tụnyere piracetam. Na oke na ụmụ oke, oxiracetam ka nchekwa dị mma na piracetam. Tụkwasị na nke a, ọ ka mma mmụta.
6) Pramiracetam me ka nchekwa dị mma. A na-ere Pramiracetam ka ọ bụrụ ọgwụgwọ maka ebe nchekwa na nlezianya anya na ndị agadi na ụbụrụ na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa vascular. Pramiracetam nwere mmetụta dị ịrịba ama na-eme ka ncheta nke ndị ọrịa ghara inwe oxygen na ụbụrụ.
7) Phenylpiracetam / Phenotropil Meziwanye Nchekwa. Usoro nke phenylpiracetam / phenotropil abughi nke oma kama o kwesiri ka ndi ozo ndi ozo di na ezumike racetam.
Ịzụta Smart ọgwụ raw powders, gbalịa hụ na HPLC na-akọ yana COA na akwụkwọ ndị ọzọ iji hụ na ha bụ ndị ọgụgụ isi na ndị dị elu.
Na-egosi 1-8 nke 13 results
β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ